I-lapdog yaseMaltese iyinja ehlekisayo, ethembekileyo kwaye intle kakhulu inobungane kunye nabaqhelana nomnini kwaye unobungane kwizilwanyana. Uhlala evuya kwaye enamandla, kulungele ukuyigcina kwigumbi, kodwa ukukhula kokuthandwa kwakhe kusalugxininiswa nokunyamekela nokunyamekela kwengubo emhlophe. Kulo lonke le nto inja ephilileyo, enomdla ngokuncinci, nangona iyakwenza uhambo olude. Njengoko uyazi, ukunyakaza kukuyimpilo, kwaye bonke abafana, kuquka iMalta, banamaxesha amade, bahlala bephila kwiminyaka eyi-16 ukuya kwe-18 nangaphezulu. Nangona inyaniso yokuba inja yokuzala i-Maltese lapdog (okanye i-maltese) idinga ukunakekelwa ngononophelo, kuyafaneleka.
Yintoni elele kwisihloko?
Igama elithi Maltese bolognese, okanye maltese, linike isiqithi saseMedithera saseMalta. Uguqulelo oluvela kwi-Italian "Maltese" okanye "Maltese", njengoko sithetha ngamanye amaxesha, ngokusobala likhokelwa ngumbhalo wesiNgesi wegama elifanayo, elibhalwa ngokufanayo njengento ethi "iMoltese" ithetha "uMaltese" okanye "Maltese" (ohlala ziqithi zaseMalta). ERashiya, ezi zizinja ziyaziwa ixesha elide kwaye zinegama lendabuko - i-Maltese lapdog. Zonke izinja ezimhlophe zelizwe lethu zaqala ukubizwa ngokuba yi-bolognese emva kokuba ziqale zivela kwi-Bologna. Izinja ezifanayo ezivela eMalta zazibizwa ngokuba yiMaldogs. Kufuneka kuqatshelwe ukuba i-Italy ivelisa ukuzimela ngokuzimeleyo kwe-bolognese, kwimbono yethu - yonke i-lapdog ye-lapdog. Ukongezelela, iMalta, okanye inja ye-Maltese, kwiincwadi zethu nakwamanye amazwe kude kube kutshanje kwakuthiwa yiPallet Pinscher (ngamanye amaxesha kunye ne-Maltese terrier, ephosakeleyo ngokupheleleyo). Mhlawumbi igama elichanekileyo kulolu hlobo ngesiRashiya luya kuba "inja yeMalta" okanye "iMalta".
Izinja zaseMalta zazidume kakhulu kwaye zithandwa. KwiGrisi neRoma yakudala kwizindlu ezizityebi zagcina abasebenzi abakhethekileyo kunye noogqirha ukuba banakekele izilwanyana. Ngokuqhelekileyo ubukho bezinja zaseMalta babufaka ubungqina kwiimeko eziphezulu zabanikazi kunye nobutyebi babo. Umlobi ongumGrike u-Oppian wathi izinja ezimhlophe zizalisa ukuzonwabisa kwabo abanini, zibahlekisa. UPliny wathi, enikwe "ipropati yokunyanga", abo bantu abanezintlungwini ezine baphilisa umphefumlo womntu, bayathuthuzela. Mayelana ne-lapel yomnye wabathetheli baseMalta, umbhali waseRoma waseRoma uMartial wabhala wathi: "UIssa udlala ngaphezu kweentlunkulu, uIssa ukhangeleka ngaphezu kwendlela yokumanga, inomdla ngaphezu kweyintombi, eyigugu kunobuncwane baseNdiya."
Ngexesha leMpi yamaKatolika amazinja aseMalta afika kumazwe amaninzi aseYurophu. Iinqwelwe zanikela izipho zazo ezimhlophe kumamazana abo. Izinja zaseMalta ziye zathandana nazo zonke iinkundla zaseburhulumenteni zaseYurophu. Babenenkosi yaseSpeyin uFilipu II, waseFrance uLouis XIV, uMpress Catherine II.
Abaculi nabo babenakukunyanzela ingqalelo kwizinto ezibonakalayo ezine ezineemilenze: i-Bolonok, ehleli kwizandla zabantu abaqaqambileyo, inokubonwa kwimifanekiso yezobugcisa abaninzi abadumile - iTitian, iVeronese, i-Durer, i-Goya, iRubens, i-Tintoretto.
Kwiintetho zokuqala zesiNgesi, izinja zaseMalta zaboniswa phantsi kwegama elithi "Terrier Maltese, okanye" iMalta Spaniel "(uthando lweNgesi ngeentlanzi kunye neepaneli kubonakaliswa ngamagama eentlobo ezivela eTibet, akukho nto enokuyenza ngayo ngeenja zaseBrithani ezingenayo: i-Tibetan terrier kunye ne-Tibani yaseSibetel). Ezinye zeenja eziboniswe zibala, ezinye zazinconywa phantsi kwengonyama.
Ukukhethwa kunye nokuzalisa kwiimpawu ezifunwayo kwakhokelela ekwakheni iintlobo ezahlukeneyo ze-bolonok. Encwadini ethi "Modern Dogs" (1894) uRavdon Lee wathi ukunyamekelwa kwengubo yezinja zaseMalta akayi kudlalwa. (Ngelo xesha, uboya obuhambayo be "Malta" budibaniswe ukuhlukana ngokuthe ngqo, ngaphandle kokubamba iintloko zeenwele entloko, ukuze izinja zikhumbuze i-Lhasa Apso.) Noko ke, ngelanga, umlobi wayephosakele ngoku; Ndimele ndithethe ukuba, ngokuqinisekileyo, izilwanyana ezihlala ngasemva komnini, zazinenhlanhla. Kwabo, ukunganakwa kwimeko "yekhanda" kuhlawula inkululeko kunye nexesha lokuzonwabisa. Ngelishwa, le nto ayinakutsholwa ngemilenze yangoku yembonakaliso, ikakhulukazi ezo zinyango ezinkulu: zibonisa iinkwenkwezi zinyanzeliswa ukuba ziphile njengeentaka ezinqabeni, kuba umzila woluboya obomvu, obuninzi kunenja, lufuna unonophelo oluzodwa oluxakekileyo. Nangona kunjalo, abanikazi abanothando bafumana ithuba, ngakwesinye icala, ukuba bagcine uboya obuhle, ngoko kuyimfuneko yokunqoba kwimiboniso, ngokufanelekileyo, nangakolunye uhlangothi musa ukuwuthintela isilwanyana sokuhamba emoyeni omtsha, kwaye njengabanye izinja, bathanda kakhulu.
Abameli balobu buhlanga babesoloko beliqela lezinja "zokunethezeka", ezo zihlala nanamhlanje, nangona zivela phambi kwethu ngendlela yebhola enesicathulo esikhethekileyo senwele. Kule fomu umculikazi, umculi waseFransi uPatricia Kaas, uTequila othembekileyo uhamba naye yonke indawo; bahlula, mhlawumbi, kuphela xa inkwenkwezi ifuna ukungena kwisigaba.
Kwiingqungquthela zeengcali zihlukanisa phakathi kweentlobo ezimbini zentlanzi: iYurophu kunye neMelika. Izinja zaseYurophu zincinane kakhulu, zinomzimba owongezelelweyo kunye nentloko ende (ngokuyinhloko ngenxa yebhokisi). American amancinci ngobukhulu, ukudibanisa okuninzi kunye nokubizwa ngokuba "ubuso bombhobho", apho umbhobho omfutshane (ohlala uhamba kunye nokuluma ngqo) unikela inja into echaphazelayo, eyongezwa ngeendlebe eziphantsi, ezingabonakaliyo kwengubo.
Kuya kuhlulwa ngamaxesha amathathu.
Iyokuqala: ukusuka kwi-3 ukuya kwi-6 ukuya kwiinyanga ezi-8. Ingubo emfutshane (i-puppy) yengubo, eqala ukukhula, idinga ukudibanisa imihla ngemihla. Ngamanye amaxesha kufuneka kwenziwe kwana maxesha amaninzi ngosuku.
Okwesibini: ukususela kwi-8 ukuya kwiinyanga ezili-18 ukuya kwezi-18. Ingubo yenja iqala ukutshintsha kwaye ifumane ubude obaneleyo. Sekuneminyaka eyi-10 ukuya kwe-15 ubude bengubo yejaji buyafana nokukhula kwayo. Kukho imfuneko yokususa kwi-papillot, ukukhusela ekungcola nasekulimaleni.
Okwesithathu: ukusuka kwiinyanga ezili-12 ukuya kwezi-18 ngaphambi kokuphela komboniso wemisebenzi. Ubulubo bengubo obumhlophe obunqabileyo beqhwa, obuninzi ukukhula kwenja ngo-3 - 10 cm. Ngaliphi na ixesha xa ukudibanisa, iipuphu zengubo kufuneka zilungiswe ukufumana umgca we-aesthetic apha ngezantsi.
Kwimeko apho awukwazi ukundibanisa inja yonke imihla, kwaye awuyi kuthatha inxaxheba kuyo kwimiboniso, uyinqumle "phantsi kwebhola." Ngoko kuya kuba lula kakhulu kuwe (ukuncinci kakhulu) kunye nenja yakho. Ingubo emfutshane yengubo, ukuba ihlambulukile kakuhle, ayifuni kwikhoyili, kwaye isikhumba siphefumula ngokukhululekile.
Kubalulekile ukuhlamba inja ubuncinane kanye emva kweentsuku ezi-7-10 iintsuku ezithatha inxaxheba kwimiboniso, kwaye kanye emva kweentsuku ezili-10 ukuya kwe-14 iintsapho zezilwanyana. Ubume bokuhlamba buxhomekeke kwixesha lonyaka, nokuba inja iyahamba ukuhamba kwaye ingaba ingcolile kangakanani. (Ehlotyeni unokuhlamba ngokupheleleyo i-maltese zonke iintsuku ezi-5 ukuya kwezingama-7.) Ngaphandle kwesi senzo i-pet yakho iya kuba yilwanyana epholileyo eneenwele ezingenakuthandeka.
Ukuhlamba kuyimfuneko ukusebenzisa iindlela ezisetyenziselwe uboya bezinja zalolu hlobo. Ukongeza kwi-shampoo, uya kufuna iimpompo ezinomgangatho ophezulu kunye neenwele-ezondlayo ezibandakanya umoya wokumisa umoya ukulungiselela ukudibanisa nokukhusela ingcingo kunye nomonakalo kwengubo. Kwibhasam, njengomthetho, amaconsi ambalwa eoli ngokukhethekileyo aklanyelwe iilwimi zelinen (ezingenambala, ezingashiyi iibala eziphuzi) zongezwa.
Enye yezona zihlandlo eziphambili ekunyamekelweni kwemiboniso yeelwimi kukusetyenziswa kwe-papillotok. Uboya buhlukaniswe emacaleni emzimbeni wenja kwaye lufakwa kwisiqwengqwana samaphepha (i-hairpin). Xa uxakeka, kufuneka uqiniseke ukuba iphepha le-papillotok lincinci kakhulu, kwaye ibhanti e-elastic, elungisa i-papillot, ayinzima kakhulu kwaye ayinakugqithisa. Uboya beMalta buhluke kwi-yorkshire terrier kunye ne-shih tzu: kubameli bezinto ezi zinzima. I-softened maloline malinen isonakaliswe ngephillotkami. Kwimeko nayiphi na into, awukwazi ukususa uboya obuvela kwiincinci zeenwele. Ngaphambi kokuvala izitshixo kwiincinci zeentloko, kuyimfuneko ukuhlambulula iinwele ezihlambulukileyo kunye nobude obude beenwele ngeoli ekhethekileyo. Awukwazi ukusebenzisa i-burdock okanye ioli ye-castor, enomthwalo onzima (izintambo zinamathele kunye, kwaye de kube sekupheleni kweoli kungeke kwenzeke). Xa uthabatha i-dog yakho inja, yishiye enye eshiya i-fawn scurf eboyeni, ibangele iminyango emva kokudibanisa kwaye ayivumeli uboya ukuba buhlakaze ngokukhululeka. Ukusetyenziswa kweoli okanye ukufaka indawo kubaluleke kakhulu ekunakekeleni uboya belolongo, lukhusela iinwele ezivela kumonakalo kunye nokukhwabanisa, kwaye luyidla yonke ubude bayo. Nangona kunjalo, kufuneka kukhunjulwe ukuba zonke iilwimi zinokuthi ziphendulwe ngabanye kwimveliso yezonyango.
Xa ubeka uboya kwiintsimbi zeenwele, kuyinto elula kakhulu ukusebenzisa i-oyile enefuthe. Ukuchithwa okunjalo kungekho kuphela okuququzelela ukudibanisa (kwenza kube lula ukudibanisa iileyile ukuba zibonakala), kodwa iyakondla kwaye ihluthe iboya.
Ngelishwa, ezininzi iinjazi zaseMalta zilahlekelwa ngumtsalane wazo, kungekhona nje ngenxa yeenwele ezingagcini kakuhle, kodwa ngenxa yezinto ezimbi ezingaphantsi kwamehlo enqabileyo. Ukubonakala kwabo kungabangelwa ngenxa yezizathu zokufa, ukungondleki okungafanelekanga (ezinye iimveliso zibangele ukunyamezela), ukungabikho kwamehlo, kunye ne-ingress yoboya kubo. Unonophelo olungileyo, oluquka ukuhlamba kunye nokunyamekelwa kwamehlo onke, kunye nokusetyenziswa kokutya okunokulinganisela, isiqinisekiso sokuthi uMalta wakho uya kubonakala ekhangayo.
Intloko ehlotswe kakuhle yenja yezilwanyana i-Maltese dog dog - ukratshi lokwenene lomnini. Ingqungquthela engqinisisekiyo: ezininzi ezibiniweyo ezibiniweyo, ukuba ingubo ide. Ukuba kusekho mfutshane kakhulu kwii-pigtails (kwii-puppies zisuka ku-3 ukuya ku-5 ukuya ku-7 iinyanga), ngoko kufuneka ufunde inja emsila. Ukuyilungisa, iigunqa ezikhethekileyo ezizodwa ezingalimazi inwele zenja zifanelekile. Ukubonakalisa inja, enye okanye ezimbini (kuxhomekeke kwintando yangaphandle kunye neendlela zobugcisa zomnini) zenziwe ngombala ophezulu.
Inja yaseMalta ijaji yintlobo enhle ngokumangalisayo, ingatshintshintshi ukususela ekuqaleni. Injongo yabalimi banamhlanje kunye nabanini abanomdla kukuba balondoloze abameli balo kwifom yeklasi: uboya obomhlophe obukhuphayo, intloko ekhukhumelayo, umsila okhukhulayo kunye nokumiswa okwexesha elide phezu kwawo! Kubalulekile ukuba ukhumbule into enye: inja yakho iya kukhangeleka kakuhle kakhulu ngokunyamekela nokunyamekela oko unokunika!
ENtshona Highland White Terrier
Unokukunceda njani umntwana ukuba asinde ekufeni kwesilwanyana
Izifo zezinja zakudala kunye neempawu zabo
Iimpawu zonyango zokusanhlamvu nokutya
Gem ukusuka kwiipassim kwi sibini
Isitayela seenwele ekhaya
IJapan Kitchen Ceramic Knives
Ingxaki yehlabathi, ingozi kunye nokutya kokutya
Ikhukhamba kwi yogurt
Inyama zrazy ngamakhowe
Ukusetyenziswa kweVaseline, ukwakheka kwayo kunye neentlobo
Indlela yokufunda i-fortune-telling on maps?